WARBIXIN :Cabdiwali Gaas iyo Axmed Madoobe oo isbahaysi ka dhan ah Xasan Sheekh Kaga Dhawaaqay Garowe,Itoobiya oo madaxa isku gelinaysa Wakiiladeeda. | Voice Of Somalia
WARBIXIN :Cabdiwali Gaas iyo Axmed Madoobe oo isbahaysi ka dhan ah Xasan Sheekh Kaga Dhawaaqay Garowe,Itoobiya oo madaxa isku gelinaysa Wakiiladeeda.
Posted on July 15, 2015 by Voice Of Somalia Standard
Waxaa sii xoogaystay khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedyada shisheeyuhu soo agaasimay ee kajira qaar katirsan gobollada dalka Soomaaliya.
Dagaal Ooge Axmed Madoobe iyo Cabdi Wali Gaas ayaa yeeshay kulamo xasaasi ah oo ay uga arrinsanayaan shirqoollo uga imaanaya dhanka Villa Somalia.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegay in Axmed Madoobe oo madax u ah maamulka Kismaayo ee Kenya taabacsan uu heshiis isbahaysi lagalay Cabdi Wali Gaas oo madax ka ah maamulka Puntland ee Itoobiya taabacsan.
Kulanka oo Garowe ka dhacay ayay labada dhinac isla garteen in ay xiriirka ujaraan maamulka Xasan Sheekh ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho,Puntland ayaa ka carootay dhismaha maamulka Galmudug ee fadhigiisu yahay magaalada Cadaado kaasi oo uu madax ka yahay C/Kariim guuleed oo katirsan Xisbiga Damuljadiid.
Sarkaal katirsan maamulka Garowe ayaa sheegay in Cumar Cabdi Rashiid uu Cabdi Wali Gaas ka codsaday in uu aqbalo wadahadal dhaxmaro isaga iyo Xasan Gurguurte, socdaalka ina Cabdi Rashiid ayaa la saadaalinayaa in uusan wax wayn soo kordhin sababa laxarariira maamulka Puntland oo u arka R/wasaare magac u yeel ah islamarkaana aan soo dhicin Karin cadka deegaanada Puntland ay ku leeyihiin waxa Federaalka loogu yeero sida ay ku doodayaan siyaasiyiinta deegaanka.
Arrinta xusidda mudan ayaa ah in cadawga shisheeye ee Itoobiya uu kala dilayo maamullada dowladaha sheegta iyo kooxda Xasan Gurguurte madaxda ka yahay tusaale ahaan maamulka Galmudug waxaa cadaado ku ilaaliya ciidamo itoobiyaan ah halka maamulka gobollada dhexe isku magacaabay ee fadhigiisu yahay Dhuusamareeb iyo Guriceel ay gacanta ku hayaan ciidamada Itoobiya.
DF-ka iyo Puntland taladooda waxay ka go’daa Itoobiya marka layskusoo xooriyana waxay dhagartu isugusoo biya shubanaysaa “Qeybi oo xukun”.
Si walba oo ay ahaato is haysadka ka dhaxeeyo maamullada dabadhilifyada soomaaliya wuxuu fursad wanaagsan siinayaan mujaahidiinta Soomaaliya ee halganka kula jira shisheeyaha.
What if Uganda and Kenya pulled out of Somalia?
DHAGEYSO:-Qeybta 13-aad ee Barnaamijka Taariikhda Tataarka.